Read more: ဆရာဦးအောင်သက်ညွန့် တရားဒေသနာ (ဆန်ဖရန်စစ္စကို)
၂၀၁၁ မတ်လ (၁၁) ရက်နေ့က (၉.၀) စကေးရှိ အင်းအားအလွန်ပြင်းသော မြေငလျှင်တစ်ခုသည် ဂျပန်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုလျက် လှုပ်ခတ်သွားရာ ဆူနာမီလှိုင်းများက မြောက်ပိုင်း ကမ်းခြေရှိ နေအိမ်၊ မော်တော်ယာဉ်၊ သင်္ဘောအလုံးစုံကို ပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်သွားခဲ့ပါသည်။ ထိုဘေးကြောင့် ဖူကူရှီးမားရှိ လူပေါင်း (၁၀၀၀၀)ခန့် သေကြေကာ အတိုင်းမသိပျောက်ဆုံးနေသူများရှိကြောင်း ၀မ်းနည်းစွာသိရှိရပါသည်။ ဤဆူနာမီသည် ဂျပန်သမိုင်းတလျှောက်၏ အဆိုးဝါးဆုံးထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
Read more: ဂျပန်နိုင်ငံ မြေငလျှင်၊ ဆူနာမီဘေးမှ ဆင်ခြင်စရာ
တရုပ်ယူနန်ပြည်နယ်မှ မြန်မာပြည်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာသည့် ဘွန်မီးဆိုသော အဖွားတစ်ဦးကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အသက် ၃၅နှစ်အရွယ်အထိ မြန်မာပြည်တွင် အိမ်ထောင်ကျ၊ စီးပွားလုပ်ကိုင်းရင်း အသက်၃၅နှစ်အရွယ်တွင် မြန်မာပြည် ကျိုးတုံမြို့မှ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်သို့ အပြီးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ သာမန် တရုပ်နွယ်ဘွား မြန်မာပြည်ပေါက် ဆွေမျိုးတစ်စု၏ အဖွားတစ်ဦး၏ ရိုးရှင်းသော ဇတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ အဖွားနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီး သူ့အထုပ္ပတိကို အင်္ဂလိပ်ပြန်ပေးရန်၊ နောက်လူများအား ဖေါ်ပြပေးရန် တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၇တွင် အဖွားမကွယ်လွန်ခင်တွင် ရိုမင်ကက်သလစ် မြန်မာဘုန်းတော်ကြီး Brother Jeffery (M.B.B.S Rangoon) က ဘာသာပြန်ပေးခဲ့သည်။ သူမ၏ ခင်ပွန်း၊မိတ်ဆွေများမှာ မယုံကြည်သူများဖြစ်သော်လည်း သူမကိုယ်တိုင်မှာ ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီး၊ သူမ၏ ပညာအထူးချွန်ဆုံးသော သမီးဖြစ်သူ ဆရာဝန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာလည်း သခင်ယေရှုကိုလက်ခံသော ခရစ်ယန်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
Read more: ဘွန်မီးဆိုသော ယုံကြည်သူအဖွားတစ်ဦး
ချစ်စွာသော အသင်းသားများနှင့်မိတ်ဆွေများသို့ ဘုရားသခင်၊ ယေရှုနာမတော်ဖြင့် သင်းအုပ်ဆရာမှ နှုတ်ခွန်းဆက်စာ ဖြစ်ပါသည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ၂၇ရက်နေ့ အသင်းတော် ၁၉နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့များအတွက် ကျေးဇူးတင်ခြင်း၊ ဘရစ်စဘိန်းမြို့တွင် ရေကြီး၊ ဒုက္ခရောက်မှု ရက်အတော်ကြာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ထိုနေရာရောက်ရှိပြီး၊
Read more: သင်းအုပ်စာလွှာ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၁ ဘီစီစီ Burmese...
ဆရာဦးကျော်ဝင်း ၂၀၀၇-၂၀၁၀ Records
Rev. Sai Aye
ဆရာဦးကျော်ဝင်းမလာရောက်နိုင်သော်လည်း မလေးရှား၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာ ၄ကြိမ်မြောက် သီဆိုချီးမွမ်းခြင်းကို ၂၁-နိုဝင်ဘာ တနင်္ဂနွေက အောင်မြင်စွားပြုလုပ်ပြီးသွားပါပြီ။ ကျေးဇူးတော်သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက် အမ်စီအေမှ ဆရာစိုင်းအေး တရားဒေသနာဟောကြားသွားပါတယ်။ Photo: Aung Htoi
၂၀၀၇က စင်ကာပူ ဂျပ်ဆမ်အသင်းတော် ဆရာဦးကျော်ဝင်း ရောက်ရှိစဉ်က အမှတ်တရ ဆရာစိုင်းအေး (ဘန်ကောက်) မှ ရိုက်ကူထားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင် မိသားစုလည်း ရောက်ရှိနေစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
Rev. Dr. U Kyaw Win visited to Singapore Judson Baptist Church in 2007. Video clip created by Rev. Sai Aye (Bangkok) for JBC Singapore Pastor Rev. Augustus and team.
Read more: ဆရာဦးကျော်ဝင်း ၂၀၀၇-၂၀၁၀ Records
ဒိန်းမတ်မှ မြန်မာများ သက်သေခံချက်
ဘုန်းတော်ထင်ရှားရန်သော့ချက် - သီဆိုချီးမွမ်းခြင်း KL (Malaysia)
ကရင်အသင်းတော်တစ်ခု - ချင်းမိုင် Karen Church in Chiang Mai